Maxaa dib loogu dhigay muxaadaradii Sheekh Umal ee Muqdisho Miyuu se Saamayn Ku Yeeshay Hadalkii Sheekh Samoow? - Jigjiga Online
HomeDiintaMaxaa dib loogu dhigay muxaadaradii Sheekh Umal ee Muqdisho Miyuu se Saamayn Ku Yeeshay Hadalkii Sheekh Samoow?
Muqdisho (JigjigaOnline) – Waxaa si lama filaan ah dib loogu dhigay muxaadaro uu Sheekh Maxamed Cabdi Umal ku qaban rabay magaalada Muqdisho, sababtuna kuma saabsana muran shalay Khamiistii hareeyay arrimha la xiriira muxaadaradaas.
Sababta rasmiga ah ee dib loogu dhigay muxaadaradaas oo uu cinwaankeedu ahaa (Waxyaabaha keena musiibooyinka, sida looga hortagi karo iyo sida xal loogu heli karo mark ay dhacaan) ayaa lagu sheegay inay tahay aaska maanta oo Jimce ah 22, November, 2019 magaalada Muqdisho loogu sameynayo Almaas Elman, oo Arbacadii geeriyootay.
Sheekha ayaa ku mashquulay Janaasada meydka haweeneydaas, kaasoo lagu sameeyay masaajidka Isbahaysiga Islaamka, salaaddii Jimcaha ka dib.
“Jaanasada walaasheen Almaas Elman Alle ha u naxariistee waxaa lagula tukan doonaa Masjidka Isbahaysiga salaadda Jimcaha keddib. Khudbada waxaa maanta ku qoran Sheekh Maxamed Cabdi Umal, isaga ayaana Janaazada hoggaamin doona Insha Allaah”, sidaas waxaa bartiisa Facebook kusoo qoray Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed.
Maalinta Axadd ah ee ay taariikhdu ku beegan tahay 24-ka bishan November ayaa lagu wadaa in ay qabsoonto muxaadarada, sida uu BBC-da u sheegay Sheekh Umal qudhiisa.
Dib u dhaca ayaa kusoo aaday xilli Khamiistii shalay si weyn baraha bulshada la iskula dhex marayay muuqaal uu soo duubay Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomoow, kaasoo uu ku mucaaraday muxaadaradaas.
Maxay ahayd doodda dhalatay?
Sheekh Soomoow ayaa shacabka Soomaalida ka dalbaday inaysan ka qeyb galin muxaadarada Sheekh Umal, isagoo ku eedeeyay inuu mas’uul ka yahay waxa uu ugu yeeray ‘musiibada ugu weyn ee ka jirta dalka’.
“Sababta aan ku diiddanahay muxaadaradaas waa in ugu horreyn qofka dhigaya uu yahay ninka la yiraahdo Sheekh Maxamed Cabdi Umal. Fikirkaan ay khawaarijtu dadka Soomaaliyeed ku baabi’iyeen ayuu wax badan taageersanaa, ilaa haddana ma ogin meel uu uga tanaasulay, gaar ahaanna culimada Ahlu Sunna Wal-Jamaaca, ee Suufiyada loo yaqaanno wuxuu u yaqaannaa gaalo, marka waxaa layaab leh oo ayaan darro ah in isagoo gaalo noo yaqaanna, dad badan oo ahlu dariiq ahna ay khawaarijtu ku leysay iftadiisa iyo fikirkiisa uu maanta dhaho waxaan u khudbeynayaa agoonti”, ayuu yiri Sheekh Soomoow.
Hase ahaatee, Sheekh Umal, ayaa beeniyay dhammaan eedeymaha uu soo jeediyay Sheekh Soomoow.
Isagoo ka hadlayay arrintaas ayuu yiri: “Anigu ma ogi wax dood ah oo ka jirta muxaadarada, in la iclaamiyay oo aan ku talagashanahay unbaan ogahay. Wadaadku waxaan u maleynayaa inuusan warba heynin, ma hurdo ayuu kasoo kacay?, afkaarta uu ka hadlayo haddey tahay middan qolada xagjirka ah ay qabaan, dadka kaliya ee la dagaallamay annagaa ahayn, billowgii ilaa dhammaadkii, oo halis badan u galay, naftooda khatar loo galiyay, culimadeenni baa lagu laayay sida la ogsoon yahay, marka wuxuu ka hadlayo ma garanin, malaha wadaadku wuxuusan la soconin waxa jira, hadduu nin aqoon diimeed leh yahay, adduunka hadda jirana uu la socdo, waxaan u maleynayaa sidaas inuusan u hadleen”.
Wuxuu sidoo kale Sheekh Umal iska fogeeyay eeeymaha la xiriira in hadalkiisa lagu laayay dad suufiyo ah iyo inuu ‘gaaleeyay’ Ahlu Sunna.
“Aniga ma ogi fatwo tey ah oo suufiyo lagu laayay, wuxuu u baahan yahay inuu keeno meesha aan aniga ku iri suufiyada hallalaayo, ama dariiqooyinka hallalaayo, ama aan ku iri waa gaalo, isaga ayaa looga baahan yahay inuu caddeeyo”.
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn ugu kala qeybsamay dooddaas, iyagoo qaarkood ay muxaadarada taageereen halka kuwo kalena ay ayideen mowqifka looga soo horjeestay.
Culimada Magaalada Muqdisho oo ka hadlay muxaadarada Sheekh Umal
Culimada Muqdisho oo ay ka mid yiihiin Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Cali Wajiis ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeray Sheekh Soomoow uusan ahayn mid ay la qabaan culimada Soomaaliyeed.
“Hadalka ka soo yeeray Sheekh Soomoow ma ahan mid uu ku matalayo culimada ee waa kalmad ra’yigiisa ah, haddii Sheekha uu wax tabanayo ama su’aal uu qabo waxay ahayd in uu culimada Soomaaliyeed la soo xiriira, Sheekha in uu ku degdego arrin noocaas ah ma ahayn”, ayuu yiri Sheekh Bashiir oo ah Guddoomiyaha Hey’adda culimada Soomaaliyeed.
Wuxuu intaa ku daray in Sheekh Umal uusan u imaanin dalxiis iyo qaraabo salaan, balse uu u yimid sidii loo gargaari lahaa dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadaha, wuxuuna ku baaqay in laga soo qeybgalo muxaadarada Sheekh Umal oo laga faaideysto.
Sidoo kale Sheekh Cali Wajiis oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in eedeemaha loo heysto Sheekh Umal aysan waxba ka jirin oo aanan loo heynin wax cadeyn ah.
Wuxuu intaa raaciyay in Dowladda Soomaaliya ay raali ka tahay muxaadarada, dadkuna ay ka soo qeybgalaan.